Maalinta: Diseembar 8, 2018
Duqa Dastuur Bisha: Booqashada Hospital ee Isbitalka
Duqa Magaalada Düzce Dursun Ay Erguvan ayaa la kulantay wakiilo warbaahin qaran iyo kuwa maxalli ah shir jaraaid oo lagu qabtay xarumaha bulshada. Ay, taraamka nostalgic oo ku yaal wadada magaalada Istanbul oo ay la socdaan dowladda hoose iyo isbitaal [More ...]
Kulankii ugu dambeeyay ee Golaha La-talinta Shaqaalaha Dowladda ee 2018 waxaa qabtay Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada. Gudoomiyaha Memur-Sen Ali Yalçın, Sarkaalka Gaadiidka-Gudoomiyaha Gudoomiyaha Can Cankesen, [More ...]
Goorma ayay Samsun Ankara adeegga xawaare sare ku bilaabaysaa?
Goorma ayay Samsun Ankara adeegga xawaare sare ku bilaabaysaa? : CHP Samsun kuxigeenka Kemal Zeybek, ayaa sheegtay in ay soo afjari doonto sanadka 2019 khadka tareenka xawaaraha sare ee Samsun-Ankara weydiisay goorta adeegga la furi doono. QALABKA [More ...]
Isniinta Strike waxay ka bilaabataa IZBAN
Nidaamka xaafadaha magaalada Izmir ee Izmir İZBAN İzmir Suburban System Inc., shaqaalaha 19.43'lik waxay dhawaan soo bandhigeen koror. Shaqaalaha IZBAN'da 342 ayaa codeynayay shalay. 320 waa diiday dalabkii loo shaqeeyaha. [More ...]
Apaydın wuxuu ahaa gudoomiyihii ugu horreeyay ee turkiga ah ee noqda Madaxweyne kuxigeenka Ururka Wadooyinka Tareenka Caalamiga ah (UIC), xubin ka ah 200 kana socda shan qaaradood.Waxaa loo doortay jagadan markii labaad si mideysan. [More ...]
Shuruucda Gaadiidka Wadahadalka waxaa la siiyey Shaqaalaha Degmada Elazığ
Aqoon-isweydaarsi aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan “Xeerarka Gaadiidka yönelik waxaa la siiyay shaqaalaha dowladda hoose ee Elazig. Aqoon-isweydaarsigan oo ay soo agaasimeen Maamulka Degmada ee Elazığ ee Diiwaan Geliyaha ayaa ahaa mid si weyn u danaynayay shaqaalaha. Waxaa loo habeeyay inay siiso adeeg dhakhso ah oo tayo leh [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay bedeshaa khadadka basaska ee jira iyadoo loo eegayo baahiyaha muwaadiniinta waxayna sameysaa isbadal cusub. Macnaha guud, marinka lambar 58 ee khadka 'West Terminal - Üçyol - Çayirköy' [More ...]
Qeybaha Gawaarida Dowlada Hoose ee Magaalada Bursa, barafka, gaar ahaan degmooyinka buuraha ayaa bilaabay in ay ka shaqeeyaan barafka. Marka la eego baaxadda dhaqdhaqaaqyada la dagaallanka barafka, 4 waa ka duwan tahay degmooyinka Inegöl, Keles iyo Büyükorhan [More ...]
Gaadiidka bilaashka leh ee IMM ee Qalabaynta Dib-u-warshadaynta
Mashruuca "Dib-u-warshadaynta Weelka 'Smart', oo uu soo saaray Mevlüt Uysal, Duqa Magaalada Istanbul ee Magaaladda Istanbul bishii Sebtembar (nidaamka dhalada ugu tuuraya kaarka Istanbul ka soo horjeedka dhalada PET iyo korantada). [More ...]
Safarka Turkiga ee Izmir ee ka soo jeeda Magaalada Boosaaso
Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo sameysay maalgashiyo badan si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadida Denizli iyo hagaajinta dalxiiska magaalada, ayaa sidoo kale ka qeybgalay Bandhigga Dalxiiska ee Turkeyzmir Dalxiiska iyo Kongareeska oo la qabtay sannadkan. Dalxiisayaal ka socda Denizli [More ...]
Samsunspor Fanaanka Mucjisada Taranta Maanta
Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Zihni Sahin, (Sabtida) Ciyaarta Manisaspor waxaa la ciyaari doonaa Yilport Samsunspor'a waxay rajeyneysaa guul, saacadaha udhaxeeya saacadaha 10.30 - 17.00 ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha casaanka ah ee taraafikada ee bilaashka ah. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Taariikhda Furitaanka ee Izmir Ankara Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Dangles ilaa 2022: Taariikhda Izmir - Tareenada xawaaraha sare ee Ankara ay bilaaban doonaan, taasoo muwaadiniin badan ay la yaaban yihiin, ayaa lagu dhawaaqay. 5 oo la socota shaqaalaha İZBAN [More ...]